रेखालाई देखाउनै हतार ! « Ramailo छ
रेखालाई देखाउनै हतार !
हामी यहाँ नायिका रेखा थापाको ‘स्कर्ट’ को कुरा गर्दै छैनौं । न त राजनीतिको नै गर्छौं । राप्रपाकी केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी रेखाले स्कर्टलाई बाई बाई गरेको धेरै बर्ष भैसक्यो । उसो भए रेखाले के देखाइन त ?
हो रेखाले देखाइन्, जुन लुकाउनु पर्ने थियो । रेखा फिल्मसको नयाँ फिल्म ‘रुद्रप्रिया’ को सुटिङमा व्यस्त रेखा सामाजिक सञ्जालमा अपडेट छिन् । फेसबुकमा रेखाको दैनिक जसो अपडेट आउँछ, अपडेटको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ फोटो । फोटो पनि ‘रुद्रप्रिया’ कै । सामान्यतयः पछिल्लो समय नेपाली फिल्मका तस्बिरहरु सुटिङ स्थलबाट सार्वजनिक हुँदैनन् । तर रेखा सार्वजनिक गरिरहेकी छिन् । सोमबार मात्रै रेखाले फिल्ममा सस्पेन्स राख्नुपर्ने दृश्यको तस्बिर सार्वजनिक गरिन् । आफ्नो बिहेका तस्बिर सस्पेन्स राखेको भए फिल्मप्रति दर्शकको कौतुहलता अझ बढ्न सक्थ्यो ।
तर फेसकुबमा सुटिङको फोटो राख्दै नहुने भन्ने होइन् । राख्ने तर सुटिङ भएका सबै दृश्यको तस्बिर भने नराख्दै राम्रो । यस्तै अवस्था हो भने रेखाले आउँदो लक्ष्मीपूजासम्म फिल्मका सबै फोटोहरु फेसबुकमा पोस्ट गर्न बेर छैन ।